Mas'uuliyiin American ah oo booqasho dhuumasho ah ku tagay Wadanka Afghanistan.
Monday October 21, 2019 - 09:55:10 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaamiyaal sarsare oo katirsan dowladda Mareykanka ayaa socdaal dhuumasho ah ku tagay magaalada Kaabuul ee caasimadda wadanka Afghanistan.
Wasiirka difaaca Mareykanka iyo Jeneraallo Melleteri ayaa socdaal aan horay loosii qorshayn ku tagay saldhigga Bagraam ee duleedka magaalada Kaabuul halkaas oo uu ku yaal saldhigga ugu weyn ee ciidamada shisheeye ku leeyihiin wadanka Afghanistan.
Mark Esper oo ah wasiirka difaaca Washington ayaa warbaahinta u sheegay in socdaalkiisu uu salka ku hayo sidii loo dhimi lahaa ciidamada American-ka ee Afghanistan ku sugan iyo suurtagalnimada in dib loo bilaabo wadahadalladii uu Mareykanku lalahaa Taliban ee ku aadanaa soo gaba gabaynta duullaanka ciidanka Mareykanka Afghanistan.
Dhinaca kale haweenayda hoggaamisa golaha Koongareeska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa xalay saqdii dhexe booqasho dhuumasho ah ku tagtay magaalada Kaabuul, wariyaal ku sugan Afghanistan ayaa sheegaya in mas'uuliyiinta Mareykanka ay wadaan qorshe lagu dhimayo ciidanka Amerikaanka ah ee waddankaas ku sugan.
Mark Esper wuxuu sheegay in ay suurtagal tahay in ciidamada Mareykanka lagusoo koobo 8600 oo askari taas oo macnaheedu yahay in Washington ay la bixi doono ciidan dhan 5400 oo askari.